प्रदेशसभा पनि विघटन हुन सक्छः मन्त्री तुम्बाहाङफे - Karnalipatra
कर्णालीपत्र संवाददाता २० पुष २०७७, सोमबार १५:०३
काठमाडाैँ – भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा प्रदेशसभा पनि विघटन हुने सम्भावना रहेको बताएकी छन्।
विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री तुम्बाहाङफेले प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने तर त्यसको अधिकार प्रदेशसभामै रहेको बताइन्।
राष्ट्रिय राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशसभामा पनि परेकाले संविधान, प्रदेशको ऐन, नियमावली अनुसार प्रदेशसभा विघटन हुन सक्ने उनको भनाई थियो।
उनले संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा पुरानै प्रक्रिया अनुसार मुलुक अघि बढ्ने बताइन्। यसबारे सर्वोच्च अदालतमा बहस जारी रहेकोले आफू धेरै टिकाटिप्पणी गर्ने अवस्थामा नरहेको उनले बताइन्।
तर संसद पुनर्स्थापना भएको खण्डमा भने मुलुक पहिलेको प्रक्रियाबाटै अघि बढ्ने उनको जिकिर थियो। उनले दुईतिहाईको बहुमत पुगेको दललाई सरकार सञ्चालन गर्न नदिएको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘बहुमतको सरकारलाई कार्य गर्न दिइएन। असहज परिस्थिति सिर्जना गरिएको छ। त्यसैले पनि असहज परिस्थितिलाई सहज बनाउनका निम्ति प्रत्यक्ष निर्वाचनमा जाने, ताजा जनादेशसहित बहुमत प्राप्त दलले सरकार सञ्चालन गर्नका लागि संसद विघटन गरिएको हो।’
वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको उनले बताइन्। अहिलेको अवस्थामा तीनै निकाय निर्वाचनका लागि तयार रहेको बताएकी मन्त्री डा. तुम्बाहाङफेले निर्वाचन गर्न कुनै समस्या नभएको प्रष्ट्याइन्।
पुन:एकीकरणका लागि दवाव दिन कार्यकर्तालाई वामदेवको अपिल(विज्ञप्तिसहित)
२० पुष २०७७, सोमबार १५:०३
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) एकता राष्ट्रिय अभियान सुरु गरेका नेता वामदेव गौतमले आमकार्यकर्तालाई पार्टी पुनःएकीकरणका लागि शीर्ष नेतालाई दवाव दिन आग्रह गरेका छन् । शीर्ष नेताले कम्युनिष्ट आन्दोलन र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत पार्टी विभाजन गर्न लागेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै नेता गौतमले आपसी सद्भाव र सौहार्दतालाई कायम राख्दै पुनःएकीकरणका लागि […]
१६ भाद्र २०७६, सोमबार ०६:०७
दुई राजदूतले लिए सपथ
कर्णालीमा बुधबार २२ जना कोरोना संक्रमित थपिए
शनिबार थप १२०२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
१० आश्विन २०७७, शनिबार ०६:३२
के छापिए आजका पत्रपत्रिकामा (फ्रन्टपेज )